I-MILL MEEK: IINGOMA KUNYE NEENKCAZO ZE-NIGHTMARES - IINDABA
Amaphupha namaphupha amabi
Ilebhile enkulu kaMeek Mill, equka uDrake, uRick Ross, uMary J. Blige, uNas, uTrey Songz, uWale, kunye nabanye, licwecwe elahlukileyo kwilizwi nakwisandi, esidlalela amandla omqokeleli weFiladelphia.
Abavuseleli abeza ngesekethe ye-mixtape banokukhetha ezimbini xa kufika ixesha lokuba benze iilebheli ezinkulu. Kwelinye icala, banokuzama ukukholisa i-fanbase yabo engundoqo ngokunamathela kwisandi sabo esisekwe. Icala elibi lale ndlela kukuba inokuphazamisa amandla abo okubamba abaphulaphuli abaninzi. (Ikwabashiya bevulelekile kwizityholo zokucela abalandeli ukuba bahlawule irekhodi ngokusisiseko eyi-mixtape efanelekileyo.) Olunye ukhetho kukuhamba ngokuzeleyo kwaye wamkele abo basebenzisana nabo kunye nezandi ezithi zinike uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu, a Indlela enxulunyaniswa nokuthengisa okungenantlonelo (i-BoB), ii-MCs zixakwe kukuzicekisa (i-Lupe Fiasco), kunye naba rap abaye bazama ukuya pop kwaye basilela nakanjani (isenzo sokuqala sikaWale).
Kukho okwahlukileyo. Amagcisa afana noDrake noJ. Cole enze ngcono, afikeleleke ngakumbi kwiingoma zokuqala ezaqala ukubenza buzz, kwaye uNicki Minaj udlala omabini amacala endle. I-Waka Flocka Flame yayikrelekrele ngokwaneleyo ukuba ingenise ixesha layo ngokuguqula i-mixtape ibe yi-albhamu yokuqala, kwaye, kutshanje, uKendrick Lamar usebenzise umbono wakhe wobugcisa ongagungqiyo ukuwuguqula ngokupheleleyo lo mdlalo. Kodwa lo ngumgca omncinci kubaculi ukuba bahambe, kunzima kakhulu ukuba i-label enkulu ye-rap rap debuts ngoku ivakalelwa njengommangaliso omncinci.
ufile I-lotus ephaphazelayo
Mhlawumbi mhlawumbi Amaphupha namaphupha amabi yinto yokubhiyozela, nangona ingafezekanga. Emva kokuhamba kulolo tsalo, Silulamile Mill ivelile ine-albhamu eyahlukileyo kwilizwi nakwisandi kwaye idlala ngamandla akhe. Kunzima kwaye kuyamangalisa, ngokungafaniyo kwepiyano eyenza isiseko sealbham kwaye uMeek udlwengula ngothakazelelo nangokwemigangatho yakhe.
Iitshaneli zakhe zomculo iintlungu, umsindo, uvelwano, kunye nokugcwala kumaza obetha ngokukhawuleza nangamandla, ngakumbi kwiingoma ezimbini zokuqala zealbham. Kwitayitile yokuvula isihloko, uqhekeza ngokungagungqiyo kangangesithuba semizuzu emine, elanda imigca evela ePhilly yokuhluba iiklabhu eMiami nasemva, ngaphezulu kwembethi yokuba morphs kwisongelo phakathi. Yindlela ehambisa kakuhle ubunyulu bukaMeek; Ukwenzakala kuphuma kwilizwi lakhe nakumazwi, kubonisa iingcambu zangempela zerap nezomoya.
IRap ihlala iphikisana, yokufuna ukuhlala uthobekile kwaye uyinyani ngelixa usomelele. Ukuthimla iintloko zokuthetha kunye neelitists ezididekileyo zisebenzisa umzabalazo njengesixhobo sokulwa nomculo: Ungenza njani lo mculo, kunye nala magcisa, xa beqhayisa ngokuphosa imali kubaphangi? Ubungangamsha bomculo kaMeek kukuba ubandakanya, aphume ngaphandle, kwaye aphendule ingxaki yomqambi.
Isandi esifanelekileyo sokurhoxisa ii-headphone
Umzabalazo kunye noloyiso, zinokubambeka kwaye zicacisiwe gca kumculo wakhe, kwaye yenza okona kulungileyo Amaphupha namaphupha amabi (kubandakanya 'Sikholose ngoThixo' kwaye 'Siyakholelwa Kuyo') baziva bebaluleke kakhulu. Ungumntu othetha inyani njengombhali weengoma, kwaye le mbono inye kunye nokuhanjiswa kuye kwahanjiswa kwimixapes yakhe. Iya kufikelela 'kuKonzakala', umkhondo apho uMeek athetha khona nombulali kayise ngelixa ebonisa ngendlela ekhohlisayo ngayo indlela akhule ngayo kuye nakwabo babemngqongile. Apho abanye abaxhasi be-rap, ubukho buka-Meek buziva bufumene.
ngokungqongqo kubalandeli bam
Ngelishwa, icwecwe liphulukana nomphunga ngekota yendlela yokuhamba. 'Ibali likaTony Pt. 2 'kukulandela umkhondo wokubalisa amabali omangalisayo ukusuka Baphupha , kodwa le nguqulo ayinako ukuchaneka kwayo kwaye ixutywe yi-chintzy Boi-1da beat. 'Ngubani omngqongileyo', equkethe uMary J. Blige, uphawula inqaku apho i-albhamu iba isiraphu kunye ne-maudlin. Ezinye iingoma ezivela ngaphambili kwi-albhamu ('Maybach Curtains', 'Young Kings') ziboleka i-orchestral bloat kaRick Ross, kwaye endaweni yazo banokuthi batshintshwe yi-up-tempo banger kwi 'House Party' okanye 'Burn' apho Ululamile igama lakhe.
Okwangoku, uMeek wenze intshukumo ukusuka kwi-mixtapes ukuya kwii-majors ngombono oqinileyo. Nokuba unokugcina okanye omeleze ukuba kwixesha elizayo ngumbuzo ovulekileyo, kodwa lo ngumculo obetha ngokukhawuleza ngokwasemoyeni nangokomzimba ngelixa ulala kwiingcinga zakho emva kokuba uwucimile. Amaphupha namaphupha amabi luhlobo lwento i-rap eza kuhlala ifuna yona, nokuba ikwindlela engalunganga *. *
mike starr alice ngamatyathanga
Iphupha eliluhlaza linamajusi amnandi j
Umatshini umpu kelly cds
U-shawn mendes uphononongo lwe-albhamu
kwenzeke ntoni kesha